Howlgalo ciidamada Garowe qabteen 8 Apr 8, 2012 - 8:55:30 AM
Ciidamada amaanka gobolka Nugaal ayaa maanta 8,April 2012 hawlgal ay qaadeen kusoo qabtey ku dhowaad 104 ruux oo looga shakisanyahay xiriir inay la leeyhiin kooxda Al-shabaab iyo ka ganacsiga maandooriyaasha.
Dhame Aadan Muuse Jaamac taliyaha saldhiga dhexe Garowe ayaa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa maanta waxana uu sheegey in dadkan ay soo qabteen ahaayeen ganacsato ka soo jeeda koonfurta Somalia oo badankood lasii daayey kadib markii damiin laga noqdey qaybna aqoonsi loo sameeyey.
Waxa uu raaciyey taliyuhu in aqoonsi loo sameyn doono dhaman ganacsatada ku sugan Garowe kana soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool si ayuu yiri aysan u suurogalin inay kusoo dhex dhuuntaan xubno ka tirsan kooxda Al-shabaab ee gabalkeedu sii dhacayo Somalia.
Sidoo kale waxa uu ka warbixiyey rag lagu soo qabtey khamro iyo maandooriyaal waxana la horgeeyey ayuu yiri taliyaha saldhiga Garowe maxkamada oo lagu xakumey lacag qaan ah.
Sidoo kale waxa digniin ka bixiyey falalka ansha xumada ah ee xiliyada habeenkii lagula baxo baabuurta banaanka magaalada ,isagoona waalidiinta ku booriyey inay gabdhahooda ceshadaan kana dalbadey culimada iyo aqoonyahana sidi looga gacan siin lahaa arintaasi.